Imiboniso bhanyabhanya yaseSychelles ebabazekayo yokuThintela abatyeleli baseRomania
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » Imiboniso bhanyabhanya yaseSychelles ebabazekayo yokuThintela abatyeleli baseRomania
iindaba • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Iindaba ezahlukeneyo
Abahambi abavela eRomania baya kukonwabela ukufudumala kweSeychelles kunye nobuhle obungathethekiyo obuvela kude xa imifanekiso emnandi yendawo ekuyiwa kuyo ibabonisa izikrini zabo zikamabonwakude ngo-Okthobha.
I-Seychelles iya kubakho kumdlalo odumileyo kwi-PROTV yaseRomania La Măruță.
Ukuthandwa komboniso kulindeleke ukuba kuphakanyise ukubonakala kunye neprofayili yaseSeychelles.
Ababukeli baya kuba nokuqonda ukutya okumnandi kwesiCreole ngotshintsho lokupheka olonwabisayo phakathi kompheki wendawo uMarcus Freminot kunye nombonisi womboniso.
Iqela elivela kwiPROTV yaseRomania beliseSeychelles kutshanje, beqokelela amanqaku abalulekileyo endawo ekuya kuyo - ukusuka elwandle kunye nemisebenzi yangaphandle ukuya kwinkcubeko nakwezolonwabo - eziza kubakho kumdlalo odumileyo obizwa ngokuba yiLa Măruță.
Umboniso, osasazwa yiPROTV, uboniswa nguCătălin Maruță ovela kusapho oludumileyo noluthandwayo lweenkwenkwezi zeTV ezivela eRomania. Ukuthandwa komboniso kulindeleke ukuba kuphakanyise ukubonakala kunye neprofayili yaseSeychelles kuloo marike njengasebusika kwaye wonke umntu amaphupha okubaleka ngokugqibeleleyo kwindawo efudumeleyo kwaye emema njengeziqithi ezincinci zoLwandlekazi lwaseIndiya.
Ababukeli baya kuba nokuqonda kokutya okumnandi kwesiCreole ngokutshintshiselana ngokupheka okuphekiweyo phakathi kompheki wendawo uMarcus Freminot kunye nomsasazi womboniso, uAndreea Dociu, apho balungiselela khona izitya zemveli ezivela kumazwe abo.
I-Chef Freminot ihambisa intlanzi ethosiweyo ngomlomo nge-Creole sauce, kunye ne-curry yenkukhu kunye ne-mango chutney njengesixhobo sokuhambisa ngelixa umbonisi u-Dociu eza nesitya esityebileyo nesisityebi esenziwe nge-polenta (cornflower), itshizi yeparmesan, ibhekoni kunye neqanda.
Ngokukhethekileyo, izitya ziya kwenza umdla wabahambi, zibahende ukuba baye eSeychelles ukuze bazingcamle ngokwabo iincasa ezimangalisayo nezinamandla zalapho ziya khona.
Abasebenzi nabo baqala ukhenketho lweMahé, benza imiboniso bhanyabhanya yamava akhethekileyo asoloko ephoswa ngabakhenkethi. Batyelele iTrois Frères Distillery eLa Plaine Ste André ukuze bafunde imbali enomdla emva kweTakamaka Rum eveliswe apha ekhaya kwaye bazonwabise kamnandi.
Hayi iholide eSeychelles igqityiwe ngaphandle 'kokutsiba kwesiqithi' kunye nePROTV iya kuzisa ababukeli babo amava okuya ePraslin ngenqwelomoya nangolwandle oluya kwisiqithi esikufutshane saseLa Digue.